BASIL. XANNAANAYNTA IYO DARYEELKA HABABKA LOO HELO WAX-SOOSAARKA TAYO SARE LEH. - BEER CAGAARAN
Basil kobcinta miraha. Hababka loo helo wax-soosaarka tayo sare leh
Basil - Waa geed ku leh dherer tetrahedral ah, oo gaadhaya heerkul dhan 35-60 cm iyo caleemo qoyan oo cagaar ah ama midab madow leh leh dherer ah 5 cm.
Ubaxyo midabyo kala duwan, oo lagu sameeyay jilayaasha. Guud ahaan, waxaa jira qiyaastii 150 nooc oo basil ah oo dabiici ah.
Karaakoobidda tufaaxa ee warshadani waa mid aad u yartahay bini-aadanka taniyo wakhtiyadii hore. Waa ku filan in lagu daro qanjirada basil ee cuntada iyo dhadhanka ayaa isbeddelaya.
Faleebo ee basil waa waxtar u leh madax xanuun, dhibaatooyinka leh mareenka caloosha iyo mindhicirka, waxaa loo isticmaali karaa qashinka, iwm.
Qodobbada waxtarka leh ee basil
Basil waxa ku jira fitamiino badan: A, B2, PP, C. Intaas waxaa dheer, waxay ka kooban tahay wax soo saarka, carotene iyo sukrose. Qodobbada faa'iido leh ee warshadda iyo dhadhankiisa waxay keeneysaa saliid muhiim ah.
Iyada oo ay ku xiran tahay hantideeda, basil ayaa loo adeegsadaa daawada dhaqanka sida daaweynta duroogada, daawada qandhada, anti-bararka, fayo-qabka iyo bakteeriyada. Basil waxaa laga diyaariyey qubeyska, kaas oo dejiya nidaamka dareenka.
Fiitamiinada ku jira qayb ka mid ah, waxay leedahay saameyn faa'iido leh nidaamka neefsashada, hagaajinta nidaamka wadnaha, hagaajinta jirka oo waxay kuu oggolaaneysaa inaad dib u soo celiso waqti gaaban ka dib qalitaanka.
Sidee u koraan basil?
Basil uma dulqaadanayo heerkulkiisu hooseeyo, sidaas darteedna wuxuu ku kordhay dalal dareen diiran. Xaaladaheena, waxaa suurtogal ah in ay koraan oo kaliya dhaqanka sanadlaha ah. Xilliga sii kordhaya ee geedka waa shan bilood.
Daryeelka Basil waa mid fudud. Waa lagama maarmaan in si joogto ah loosen, biyaha iyo bacrimiya ciidda.
Si loo go'aamiyo muddada dhirta goosashada, waa inaad xusuustaa inta saliid ee lagama maarmaanka ah ay ku jirto mudo cayiman. Tusaale ahaan, basil caadiga ah, inta ugu badan nafaqooyinka ayaa la helaa wakhtiga dayactirka, inta lagu guda jiro duufaanta, hoos u dhac, iyo ubax qoyan waxay gaari doontaa dantooda.
Iyadoo ku xiran nooca dhirta, muddada ay Bisaylkiisa ayaa sidoo kale ka duwan yahay, iyo, si waafaqsan, waqtiga beergooyska.
Xeerarka loogu talagalay broccoli sii kordhaya.
Akhri sifooyinka tayo-saaraha ee maqaalkan halkan.
Baro wax walba oo ku saabsan kobcin sii kordhaya //rusfermer.net/ogorod/listovye-ovoshhi/vyrashhivanie-i-uhod/vyrashivanie-pekinskuyu-kapustu-na-svoem-uchastke.html.
Balsiinka beeraha iyo daryeelka
Basil waa in lagu beeraa bacrin, carrada neefta leh. Ma jecla meelaha kale. Dhaqanka waa thermophilic, u dhintaa inta lagu jiro dhaxan. Nalalka aan fiicnayn ayaa sidoo kale keenaya cawaaqib xumo.
Be basil for geedo ku wareegsan dhamaadka March - horraantii Abriil, guriga ee sanduuq leh dhulka. Seeds digo ciidda si fiican u buuxsamay, hal mitir ah. Masaafada u dhaxaysa safarka waa shan sintimitir.
Wixii koritaanka abuurka ku filan heerkulka ku filan 20-27 °. Caleemaha ayaa isku muuqda hal wiig ah. Ka dibna, geedo yihiin transplanted galay dheriyo, ka dibna transplanted galay dhulka u furan.
Isku dar ah ciidda waxaa loo diyaarin karaa xiriirka: laba qaybood oo ah peat iyo hal qayb oo ah compost. Isku daridda nafaqada ee sanduuqa waxaa lagu waraabiyaa Bacriminta macdanta: toban litir oo biyo ah ayaa milmaa hal shaaha oo ah HOL, chloride potassium, potassium sulfate ama superphosphate.
Ka hor inta beero, aad ma qallajin karo abuur ah. Laakiin carrada waa in had iyo jeer la dhigo qoyan. Mar walba hubi xaaladaha heerkulka iyo qoyaanka. Ha ka badin ciidda biyo, haddii kale dhirta ayaa ku dhufan karta "lugta madow".
Sidoo kale, ha ku waraabin geedo biyo qabow. Si looga hortago dhacdooyinka cudurrada, waxaa lagama maarmaan ah in si joogto ah biyaha biyaha loo raaco xalalka sulphate copper laga bilaabo saamiga: hal litir oo biyo ah halkii nus qaado oo xal ah.
Markaad dooranayso goob loogu talagalay beerashada, xasuuso in basil aan la beeray meeshii uu ku koray wakhtigii hore. Haddii kale, dhirta waxaa saameyn kara fusarium, sifooyinka kala duwan ee kuwaas oo ah dhibco madow muuqanaya caleemaha. Basil waxaa lagu beeray toban sano ka dib.
Masaafada u dhaxaysa safarka marka la beerto geedo dhulka waa inay ahaataa ugu yaraan afartan mitir. Masaafada u dhexaysa dhirta waa qiyaastii 30 cm.
Basil waa in la beeraa tobanka sanno ee tobnaad markay tahay marka cimiladu diirto, maalmaha daruuraha kulul, ama kulaylka ka dib. Ha iloobin inaad biyaha u waraabiso.
Si aad u daryeeshid dhirtu waa mid aad u fudud: waxaad u baahan tahay inaad si joogto ah u dabciso carrada, ka saar cawska, iyada oo erayga mar walba nadiifi.
Hilling ciidda iyo waraabinta ugu yaraan toban jeer inta lagu guda jiro xilli sii kordhaya waa la soo dhaweynayaa. Haddii dhirta loo waraabiyo sida ku cad qorshaha kor ku xusan, fursadaha helitaanka dalag weyn oo kordha badan ayaa ka badan.
Marka ugu horeysa, dhirta waxay u egyihiin niyad-jab, waxay horumariyaan liidashada waxayna u baahan yihiin daryeel joogto ah. Horumarka ugu sarreeya wuxuu dhacaa heerkul ah ugu yaraan +19 C. Sidaa darteed, daboolka basil oo leh caag balaastig ah.
Baro boggayaga internetka dhamaan sifooyinka faa'iidada leh ee dill iyo iyaga u adeegsan.
Talooyin ku saabsan goortii ay ku beeri lahaayeen geedo kaabaji ee maqaalkan halkan //rusfermer.net/ogorod/listovye-ovoshhi/vyrashhivanie-i-uhod/vyrashhivanie-rassady_kapusti_v_domashnih_usloviyah.html.
Inkastoo basilku korayo oo uu horumaro, waa in la quudiyo. Cuntada ugu horreysa waxaa la qaadaa toban maalmood ka dib marka la beerto, iyo tan labaad - 20 maalmood kadib markii ugu horeysay. Waxyaabaha ay ka kooban tahay: laba malmood oo nitrophobia ah ayaa lagu qasi karaa toban litir oo biyo ah waxaana lagu waraabiyey heerka: 4 litir oo m2 ah.
Cutubka koowaad ee cagaarka waxaa la fuliyaa dhirta dhalinyarada, xitaa ka hor ubax: caleemaha la ururiyey iyo saqafyada, oo ku saabsan ilaa laba iyo toban centimitir dheer, waa la gooyaa. Uruurinta mass ee cagaarka waxaa lagu fuliyaa marxal ubax, marka caleemaha yar yar iyo caleemaha noqdaan ugu ugudha. Markaasaa beergooyska la qalajiyey.
Qalajinta cagaarka waa in lagu sameeyaa qol mugdi ah. Dhirta la qalajiyey waa dhul daadi ah, ku shubay suxuunta, si adag u xir oo uga tagay meel mugdi ah. Carafka dhirta wuxuu soconayaa ilaa saddex sano! Haddii aad rabto in aad caleemaha cusub ku hayso, waa ku filan inaad ku dhejisid dheriga dhoobada, kula saydhaa cusbo, oo waxaad ku shubtaa saliidda khudradda sare.
Sida rooti, ​​waxaad isticmaali kartaa cagaarka la qalajiyey iyo kuwa cusub. Waxaa lagu daraa maraqa kala duwan, saladhyada, iyo sidoo kale suxuunta cuntada, loo isticmaalo qashinka iyo caanaha, iwm.
Basil wuxuu aad ugu badan yahay Cunnada Aasiya iyo Galbeedka Yurub. Xawaashkan wuxuu ku habboon yahay tiro badan oo suxuun. Warshadda waxaa loo isticmaali karaa daawo cudurada kelyaha, wadnaha iyo sambabada, waxay uqaabilaan oo waxay siisaa jawi.
Qaar ka mid ah Faa'iidooyinka dadweynaha waxay isticmaalaan basil sida geedka ornamental sababtoo ah rafcaan aragti iyo caraf udgoon.
Cayayaanka Basil iyo Cudurada
Basil aad ayuu u adkeeyaa cudurada kala duwan. Sababta ugu weyn ee cudurada waa qoyaan xad dhaaf ah iyo inta jeer ee beerto. Cudurada ugu caansan waxaa ka mid ah:
Calaamadaha: Qeybta warshadu waxay qaadataa midab madow haddii jirku uu ka dhacay marxaladaha hore ee Bisaylkiisa;
Dhalxumadu waxay qalalaan iyo geedka si tartiib tartiib ah u dhacaa marka laga adkaado kahor inta aan ubaxu bilaabmin.
Cudurku wuxuu ku dhici karaa dhowr sababood: Isbeddel deg-deg ah ee qoyaanka iyo heerkulka hawada iyo carrada, la'aanta cuntada oo ay soo martay carrada, qoyaanka xad dhaafka ah ee ciidda iyo cufnaanta kordhay. Sidaa darteed, waa lagama maarmaan in la daboolo ciidda si joogto ah si ay u hesho nafaqooyinka iyo ogsijiinka.
Cudurka Basil - Gubasho Gubasho
Waa cudur fungal ah oo saameeya qaybo dhirta dhintay. Muuqaal aad u kala duwan ayaa ah huuri, cadaan hore, ka dibna dambaska cagaarka ah ee meelaha ay dhibaatadu saameysey ee basil. Haddii aad si xad dhaaf ah u biyo qabatid oo aadan raacin dhibcaha heerkulka, cudurku wuxuu kaloo saameyn karaa dhirta caafimaad leh.
Si aad u jabiso cudurka, dhammaan dhirta ay saameeyeen waa in laga saaraa beerta iyo si taxadar leh u daadin dhulka. Si aad u isticmaasho daawooyinka kiimikada ah waa kuwo aan loo baahnayn. Waxaad ku guuleysan kartaa saameynta saxda ah ee saxda ah.
Cayayaanka waxay ku dhow yihiin inayan ku dhibin basil. Xaqiiqdu waxay tahay iyada oo ay sabab u tahay suntan cayayaanka, waxaa loo isticmaalaa in lagu ilaaliyo geedaha kale ee aphids, caarada caarada, iyo cayayaanka kale ee jecel inay cunaan miraha cusub. Tani waxaa loo sameeyaa sida soo socota: Basil waxaa lagu beeray dhir la xidhiidha dhirta ay saameeyeen, taas oo sababtey naqshadaynta joojinta dhirta. Ama dheriyo leh basil ayaa dhigaya dhumucda geedo, tusaale ahaan, beerta.
Halkan, laga yaabee, oo dhan, inaad ogaatid. Aqoonta ayaa heshay ka dib markii ay akhriso maqaalkani oo lagu dabaqay ficil ahaan waxay kaa caawin doontaa inaad ku beerato oo aad u korato basilkii karsan ee adigaa iska leh oo u adeegso ujeedada loogu talagalay.
Ha ilaawin inaad u hoggaansamto shuruudaha khuseeya beerista basil. Haddii kale, waxaa jira khatar ah in aan la goynin sababtoo ah guuldarada basil ee cudurku ama cirridka awgeed sababtoo ah waraabinta ku filan ee ciidda.
Noocyada qajaarka lagu beeray aqalka dhirta lagu koriyo boggayaga.
Kordhinta yaanyada ee aqalka dhirta lagu koriyo ha iloobin ku saabsan quudinta //rusfermer.net/ogorod/plodovye-ovoshhi/vyrashhivanie-v-teplitsah/vyrashhivanie-pomidor-v-teplitse-sovety-i-rekomendatsii.html.